SAWIRRO:-Madaxweynaha DDSI mustafe muxumed cumar oo tagay deegaanka Tulli-Guuled |
SAWIRRO:-Madaxweynaha DDSI mustafe muxumed cumar oo tagay deegaanka Tulli-Guuled
Madaxweynaha kumeel gaadhka ah ee Dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustaf Muxumed Cumar ayaa waxa uu booqday deegaanka Tulli-Guuled halkaas oo Maalin ka hor Qowmiyada Oromada ay ku dishay ku dhowaad 10 Ruux oo Soomaali ah.
Madaxweyne Mustafa Cagjar oo ay la socdeen Xubno ka tirsan Dowlad deegaanka ayaa la kulmay Waxgaradka iyo Odayaasha Tuuli guuleed sida uu sheegay Cabdi Rashiid oo ka mid ah wafdiga Madaxweyne Cagjar
”Waxaan la kulanay anniga iyo madaxweyne Mustafe odayaasha Tulliguuleed, insha allah waxaan sidoo kale la kulmaynaa odayaasha beesha Jinacsanay. Madaxweyne Mustafe waxaa muhiimada koobaad u ah xalinta khilaafaadka xuduuda iyo dib-u heshiisiin guud oo deegaanka ka dhacda.
Madaxweyne Mustafa Cagjar oo kulanka ka hadlay ayaa isna waxa uu sheegay in ay ku dhaqaaqayaan waxkasta oo xal looga gaarayo khilaafaadka xadka Soomaalida iyo Oromada,waxaana uu rajo ka muujiyey inay guuleysan doonaan.
Dagaalka u dhaxeeya Qowmiyada Oromada iyo Soomaalida ayaa ah mid mudo badan soo jiimayey,iyada oo aysan ku guuleysan inay nabad ka dhex dhigaan Madaxdii soo martay dalka Itoobiya.
Sidoo kale Maanta ayaa la filayaa in uu la kulmo Odayaasha Dhaqanka midka mid ah beelaha dega Tuulada Tulli-Guuleed.
Madaxweyne mustafe ayaa waxaa uu dadaal xoogan ugu jiraa samata bixinta Dadka degaanka oo dhibaatooyin dhinacyo badan leh wajahayay mudo dheer.
Degaanka somalida ayaa ahaa meel colaad iyo cabsi daashatay coladahaas oo madaxdii hore ayna wax xil ah iska saarin xal u raadinteeda.